Yonke into eyaziwayo yentombazana enomfana isoloko iquka ukuzonwabisa okukhulu, ukulindela okulungileyo kwintlanganiso yento ekhethekileyo. Amantombazana amaninzi ayengacingi ukuba oku, mhlawumbi, kuphela yodwa abaye baphupha. Nangona kunjalo, akulula ukwenza ulwalamano. Abafana, ngenxa yobume babo, bahlala bethula baze bahoxiswe, kwaye abanye bavele banqabise ukuzithemba. Amantombazana anokuthetha ngaphandle kokuphazamiseka. Le nto inokuzithembela kumfana inokuwela phantsi nangona uhlala umbuza imibuzo engakhululekile kwaye engathandekiyo. Ngoko ke unjani na imibuzo enokubuza abantu ukuba babonise umdla kumnxibelelwano?
Imibuzo engaqhelekanga kumntu
Yonke into eyaziwayo yentombazana enomfana isoloko iquka ukuzonwabisa okukhulu, ukulindela okulungileyo kwintlanganiso yento ekhethekileyo. Amantombazana amaninzi ayengacingi ukuba oku, mhlawumbi, kuphela yodwa abaye baphupha. Nangona kunjalo, akulula ukwenza ulwalamano. Abafana, ngenxa yobume babo, bahlala bethula baze bahoxiswe, kwaye abanye bavele banqabise ukuzithemba. Amantombazana anokuthetha ngaphandle kokuyeka. Le nto inokuzithembela kumfana inokuwela phantsi nangona uhlala umbuza imibuzo engakhululekile kwaye engathandekiyo. Ngoko ke ndifanele ndibacele ukuba babonise umdla kumnxibelelwano?
Yimiphi imibuzo abafana bayayithanda Ngento enye yokubuza umntu onokuzibuza Ngomhla wokuqala
Yintoni ongayibuza ngomhla wokuqala
Okokuqala, intombazana kufuneka ilibale zonke iintlobo ze-banal encinci "njani wena" kwaye "njani isimo sezulu". Bored all to the point of indecency, bavele bamkhwelisa loo mfana. Kungcono ukubonakalisa ingcamango kwaye ubonise umdla onomdla kwimpendulo. Umzekelo, uyazi ukuba umfana unomdla ngezemidlalo. Kuyafaneleka ukubuza: "Kutheni uthanda lolu hlobo lwemidlalo?", "Ude usebenze ixesha elingakanani?". Fumana isihloko esiyithandayo, ngoko ukuqina kuya kudlula ngokwalo. Ukuba akaqapheli nto ngaphandle kweekhompyutheni zekhompyutha, ngoko ungasebenzisa inkohliso engokwemvelo: "Yiyiphi imidlalo odlalayo?", "Yintoni entsha, okanye ndilahlekelwe yonke into ngolu cwaningo / umsebenzi?". Umfana uya kubaphendula ngokuzonwabisa.
Ngokuqinisekileyo, awuyi kuhlala uxoxa ngegloves zakhe ezintsha zebhokisi okanye ukuba phakathi kweemidlalo kukho izinto ezintsha. Ngenxa yoko, kungekudala ukubona imvuselelo kwiingxoxo, cela malunga nento ayithandayo uhlobo lokuphumla, kunokuba unomdla omkhulu. Mhlawumbi uthanda amakati anjengawe, okanye uthanda ukubukela ifilimu yakudala yaseSoviet. Into ephambili kukuba umbuzo wakho awukwazi ukuwubeka ekumanyeleni, kwaye unomdla kubo bobabini. Ukuba isi sibini sifumana umdla, sihlazo kunye neentloni zihamba ngokukhawuleza. Emva koko umfana ngokwakhe uya kuqala ukubonisa intetho kwaye abuze malunga nezenzo zokuzonwabisa kunye neziqhotyoshelweyo.
Yimiphi imibuzo abafana bayayithanda?
Amantombazana abathanda xa intombazana ibabuza malunga nobuntwana babo. Buza malunga nezinto zakhe zokuqala zokukhumbula ukuba kwakunjani - ebuntwaneni bakhe. Nguwuphi umzali osondele kuye, ngubani na owamqondayo nothando olungakumbi? Wayeneminyaka emingakanani xa ebeka usuku lwakhe lokuqala, lwaphela njani?
Bonke abantu bathanda ukuthetha ngokuxhaphaza kwabo emsebenzini. Mbuze apho asebenze khona ngaphambili, apho usebenza khona ngoku? Kuya kuba nomdla kakhulu kuye ukuba acinge ngombuzo othethekileyo wohlobo "kuthekani ukuba ...?" Ngokomzekelo, ukuba ngokukhawuleza wabamba isigidimi, uya kuchitha phi? Iyiphi indima ayefuna ukuyidlala xa wayenyiwe ukuba enze i-movie? Ukuba unikwe ilungelo lokukhetha, uyafuna kuphi ukuhlala phi? Ubani ofuna ukuhlala kwisiqithi esingahlali kuyo? Wayeza kuthatha ntoni naye apho?
Yintoni enye yokubuza umntu
Ukuba uye wazizana ixesha elide, ngoko-ke qiniseka ukuba ubuze "njani usuku lwakho", "yintoni eyenzekayo." Kungenzeka ukuba isihloko sinomdla kuye, uziva unxanelekile. Musa nje ukukhawuleza ukumxelela ngokukhawuleza. Kungcono ukuphulaphula ngokucophelela kwaye ngokungapheliyo ukuguqulela isihloko kwisifundo esifanelekileyo kwindawo yomdla. Ngokomzekelo, umngane wakhe omhle wayexabana nentombazana ngenxa yokungavumi ukuya naye kwi-disco. Emva kokuphulaphula, unobtrusively ubuze umbuzo: "Ewe, kwaye siya kuhamba nini? Siya kuhamba, asiyi kuthi? "
Yakha unxibelelwano uze ubuze imibuzo efanelekileyo oyifunayo ukuze ukwazi ukuphuma kwaye ukude. Khumbula ukuba zihlandlo ezininzi kwifowuni emva kwethemplate "wubonga" ngokukhawuleza, ngaphandle kokulinda impendulo, wabuza "Uphi na?". Mhlawumbi uya kuyiphendula, kodwa ukuba imeko yakhe imbi, ngoko unokuba nomsindo. Lo mbuzo kufuneka ucelwe ngokungafaniyo: "Sawubona, ndihleli apha ngefestile, ndibonisa iBarsik yethu, kwaye wenzani na?" Umbuzo onjalo woqobo uza kumnceda umntu ukuba akuxele ngokukhawuleza ukuba ungubani kunye noko akwenzayo. Ngexesha elifanayo akayi kuhanjelwa yimvakalelo engathandekiyo yokuba uzama ukumlawula.
Kuya kubonakala, yintoni umehluko, yintoni umbuzo onokuwubuza, intsingiselo ayitshintshi? Kodwa enyanisweni, nokuba enye ingakhathali, indelicate okanye umbuzo onobuwula ungonakalisa yonke into eyadalwa ngaphambili. Okanye akayi kuzala into entsha. Njengokuba omnye umbuzo ochanekileyo kunye ochaphazelekayo unokuvula ii-horizons ezintsha, mhlawumbi nokuba ikusasa lakho.
Amazwi malunga nokwesaba uthando
Isimo somtshato: ongatshatanga
Indlela yokubamba ingqalelo kwindoda uAgasari
Indlela umfana angenza ngayo umqondo wesitayela
IMvana kunye no-anyanisi
UKonstantin Khabensky no-Olga Litvinova balinde umntwana
Iipropati eziwusizo zeetunes
Izindlela zokususa umntu osicasulayo
Kuthekani ukuba indoda ibe ngumfazi ayinomdla njengendoda?
Yintoni umntu akwenzayo ukutsala ingqalelo yowesifazane
Imfihlelo yangaphakathi ye style Provence